Third Heaven: 2011
All in the Family by Brian Warner
He hoped the tape recorder would still work. It was one of those small portable ones often used in schools or libraries.
Teddy didn't even realize the irony of his action-Angie was in fact the one who had bought it for him. He wiped the hair and blood off the corner and releasedasigh of frustration. "Mother will probably ground me from the television," he considered, looking to the mess he had made.
"Damn her. Damn them all. Why did she have to hurt Peg? Why?" Balefully, he kicked the corpse beside him. Her glazed eyes stared back at him with empty fascination. "You bitch. You killed Peg."
His sister's dead look gave no response. (He wondered why.) Her face looked so shadowed. He lifted her head up by her clotted hair and saw that it was dried blood on her cheek that created the mock shadow. He saw, too, that the dent in her skull had stopped gushing; the coagulated blood had formedagelatinous plug.
Category - Marilyn Manson, short story
ပညာဆိုတာ အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ ပညာရှိရင် ဘာမဆိုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မှာ ငြင်းတဲ့အခါ နိုင်အောင်ငြင်းနိုင်ရုံမက နိုင်ငံတစ်နိုင်လုံးကိုပါ ဦးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ပညာအများစုဟာ စာအုပ်တွေထဲမှာ ရှိပါတယ်။ စာများများဖတ်လေ၊ အတွေ့အကြုံပိုရှိလေ၊ ပိုစဉ်းစားတတ်လာလေ၊ ပညာရှိလေပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ အသက်ကို ပညာနဲ့တိုင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာအုပ်တွေဟာ ဘဝမှာ အရေးပါဆုံး အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့ရာ နိုင်ငံသားတွေ ပညာတတ်ရေးပါ အရေးပါဆုံးပါ။ နိုင်ငံသားတွေ ပညာတတ်ရန် စာကြည့်တိုက်တွေဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တွေ၊ မြို့နယ်စာကြည့်တိုက်တွေ ဗုံးပေါလအော ဖွင့်နေတာ သတင်းစာထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အောင်မြင်သလား မအောင်မြင်သလား မသိပါ။ ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲပေါ့။ အလှူငွေထည့်ဖို့လဲ အပိုငွေမရှိပါ။ အမြတ်တနိုး စုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေ လှူပစ်ဖို့ဆိုတာကလဲ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးကို ကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက် လုပ်ဖို့ စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။
I have always beenahuge fan of Marilyn Manson. I loved his music, performance, writings, appearance, well, everything. I admired him and in the same level as Hitler, Mao, and even Nietzsche and Karl Marx. Because he is the only individual of our age who is so powerful and strong. I was heavily influenced by him since I wasakid. Actually, my interest in philosophy, religion, fame, and freedom started with listening to him. His lyrics struck me in the head. I admired him, appreciated him. It is normal for me to have interest in the life ofaman who I admire.
Through the reading of his book, I became to understand him more than ever. His ideas, his life, his experiences, his philosophy, I can see them clearly in his book. His life isastory ofaworm, who is scared and abused, struggle his way up to get wings and becameahero, Antichrist.
Category - Marilyn Manson, review
Franz Kafka's The Trial Review
It's beenalong time since i update this blog. The reason is I simply don't have any inspiration these days. (or maybe I'm not trying to write) Just as in my last short-story, my life-course is repeated with same schedule everyday and then I'm lost. Still, there are some drafts which are just some paragraphs or comments. Here is one of these,areview I wrote on Goodreads.com, which maybe my last straw to regain my inspiration. I hope I can update again one or twice per week.
P.S. I will try to avoid sophisticated tone in my later submissions and try to act like just another blogger ;D
Kafka's another attempt to make fun of livingalife. This time with the Trial. One morning, you are accused with unknown crime and live your life asacriminal, everyday is the trial. You can't do anything to defend. You can't run, you can't hide. You desperately search for help but that, too, is hopeless. The Law is above everything. (Heavenly law?) Later, you will realize that you can't do anything to it and finally wait for the judgement, and accept it. That is Kafka's version of life.
In this story, Kafka's symbolism is impressive. It reflects on religion, life, law, even political status of Germany in his era. The young has lost hope, the court is unreliable, the court officials are the worst of all. I'm afraid it, too, reflects the current state of Burma today.
Category - Franz Kafka, review
ဤအရေးအသားမှာ ကာ(ဖ)ကာ 1919 ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော အရေးအသားဖြစ်သည်။ သူ၏ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်စာအုပ် ခေါင်းစဉ်အမည်လည်း ဖြစ်သည်။ မူရင်း ဂျာမန်ဘာသာစကားမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်သူ အများအပြားရှိရာ ယခု အရေးအသားတွင် Malaspina University-College မှ Ian Johnston ၏ မူကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား တည်ဆောက်ပုံအခြေခံ မတူညီသော အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် အကြောင်းအရာကိုသာ အနီးစပ်ဆုံး ပြန်လည်ဖော်ပြနိုင်ပြီး “အရေးအသား” မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ဘာသာစကား ဘောင်အတွင်းမှသာ နားလည်နိုင်သော အသုံးအနှုန်းများ၊ ဝါကျများ၊ ဘန်းစကားများမှာ ရှိတတ်စမြဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းမှာ အကြမ်းထည်မျှသာဖြစ်ပြီး တကယ့် ကာ(ဖ)ကာကို မတွေ့နိုင်။ ထို့ကြောင့် တတ်နိုင်လျှင် မူရင်း ဂျာမန် အရေးအသားကိုသာ ရှာဖွေဖတ်ရှု စေချင်သည်။ ဂျပန်မှလည်း ကာတွန်းပြန်ဆွဲထားသည်။ ယခု ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ထားသော အင်္ဂလိပ် အရေးအသား မူရင်းကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ http://records.viu.ca/~johnstoi/kafka/countrydoctor.htm
Category - Franz Kafka, short story, ဘာသာပြန်
ကျွန်တော် ဟိုနေ့ညက အင်တာနက်လိုင်း ပြတ်တောက်သွားလို့ ပြောနေတာလေး မပြီးမပြတ် ဖြစ်သွားရတာကို အခု နည်းနည်းတော့ ဆက်ပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်တဲ့ ကိစ္စမှာ မကျွမ်းကျင်သလို ဘိုစာကိုလည်း တစ်ဖက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်ထားတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ စာဖတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်၊ လမ်းပေါ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်တာပါပဲ။
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အရေးအသားတွေကို ဘာသာပြန်တဲ့ကိစ္စဟာ တော်တော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အထူးသဖြင့် Philosophy လို ဘာသာရပ်မျိုးပေါ့။ ဦးလေးသိတဲ့အတိုင်း Philosophy ဟာ နဂိုကတည်းက သဘောတရား ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြင် စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေကလည်း ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီလိုဟာမျိုးကို ဘာသာစကား ဖလှယ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Philosophy မှာ စကားလုံး/စာလုံးတွေက အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်နေလေတော့ ဘာသာစကားနဲ့လည်း ကင်းကွာလို့ မဖြစ်ဘူး။ (သင်္ချာမှာလို သင်္ကေတနဲ့ ရှင်းပြဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။) ဒီတော့လည်း Philosophy ကို ဘာသာပြန်တဲ့ အခါမှာ အဓိပ္ပာယ်တိကျမှုက လိုအပ်ချက် တစ်ခုပဲ။ စကားလုံး/စာလုံး တစ်ခုဟာ အယူအဆ၊ အဓိပ္ပာယ် ကွဲပြားသွားနိုင်တာပဲ။
ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ ခံစားချက်တွေလဲပါတယ်
ဒီအိပ်မက်က တစ်ဘဝစာ ရှည်တယ်
ဒီအိပ်မက်လေး ပြီးဆုံးသွားမှာ ကြောက်နေမိတယ်...။
ကျွန်တော် ဤစာကြောင်းကို စတင်ရေးလိုက်သည့် အချိန်မှ စတင်၍ ကျွန်တော့်တွင် မသိစိတ်များကသာ လွှမ်းမိုးသွားပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ကျွန်တော် ဤစာသားများကို ရေးနေခြင်းမှာ မသိစိတ်ဖြင့် ရေးနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သိစိတ်ဖြင့် ရေးသားနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ထိုသို့ ပြောလိုက်ခြင်းသည် ကျွန်တော့်၏ လိမ်လည်မှုတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်းကို သင်သိသလို ကျွန်တော်လည်း သိပါသည်။ စင်စစ် “မသိစိတ်ကို သိနေသည်” ဟူသော ဝါကျမှာ ဝိရောဓိအဆိုတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ကျွန်တော်သာ မသိစိတ်ဖြင့် ဤစာကြောင်းများကို ရေးနေသည် ဆိုပါလျှင် ထိုအကြောင်းကို ကျွန်တော်သည် မည်သို့မျှ မသိနိုင်ပါ။ ဤစာသားများကိုလည်း မည်သို့မျှ ရေးသားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ် မသိသောအရာကို ကျွန်ုပ်က မည်ကဲ့သို့ ဖော်ပြနိုင်မည်နည်း။ ထို့ကြောင့် ဤ အရေးအသား တစ်ခုလုံးမှာ ဝိရောဓိအဆိုသင့်နေသော အရေးအသားများသာ ဖြစ်ပါသည်။
မနက်ဖြန် သတင်းစာကို ယနေ့ဖတ်ခြင်း မှစ၍ ဝိရောဓိအဆိုသင့်နေသော အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ ဆိုရလျှင် သင်မရေးတတ်သော စာလုံးကို ရေးကြည့်ပါ။ သင် မသိသောအရာ အကြောင်းကို ပြောပြပါ။ ထိုသို့သော ကိစ္စများသည် ကိုယ့်တံတောင်ဆစ်ကိုယ် လျှာဖြင့်လျှက်ကြည့်သလို အပြောလွယ်၍ လက်တွေ့မကျသော ကိစ္စများသာ ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ဝိရောဓိများကို ကျွန်တော် ချစ်သည်။ ဝိရောဓိများတွင် တစ်နည်းတစ်ဖုံဖြင့် သူတို့၏ အလှအပများ တည်ရှိနေသည်။ အနည်းဆုံး ၎င်းတို့အကြောင်း စဉ်းစားရခြင်းသည် စိတ်ကျေနပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ငယ်ငယ်က အဖေရယ်၊ ဘကြီးသုခရယ်၊ ဦးလေးခန့်ရယ် ဘုန်းကြီး ဦးအဂ္ဂရဲ့ ဖိုရုံကလေးမှာ ထိုင်စကားပြောကြရင်း ငြင်းကြတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ "ပျော်တယ်" ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ရေနွေးကြမ်းသောက်ကြရင်း စကားအူပေါက် လျှောက်ပြောကြရာက အဲဒီအကြောင်းကို ပြောလေ့ရှိကြတာပဲ။ ဦးလေးခန့်ကတော့ ကျောင်းဆရာပေတဲ့ စကားနည်းတယ်။ (အဖေတို့တစ်တွေဟာ ကျောင်းဆရာဘဝက လာကြတာချည်းပဲ။ ဦးလေးခန့် တစ်ယောက်သာ သေတဲ့အထိ ကျောင်းဆရာ လုပ်သွားတာ။) သူက နားထောင်တာ များတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဖေနဲ့ ဘကြီးသုခတို့နှစ်ယောက်သား စကားအချေအတင်ပြောရင် သဘောကျတယ်။ ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့ အဓိကအချက်တစ်ခုကတော့ အဖေနဲ့ ဘကြီးသုခတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံအမြင်ဟာ လုံးလုံးကို မတူဘူး။ အဖေက ဘာသာရေးမှာ အခြေခံတယ်။ ဘကြီးသုခက လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မှုမှာ အခြေခံတယ်။
အဖေနဲ့ ဘကြီးသုခတို့ပြောတဲ့ "ပျော်တယ်"၊ "မပျော်ဘူး"။ "လူဘယ်လိုပျော်သလဲ"၊ "လူပျော်နိုင်သလား" ဆိုတာတွေကို အရှည်အကျယ် စဉ်းစားမကြည့်ခဲ့မိဖူးဘူး။ ခေါင်းထဲမှာတော့ ရှိနေတယ်။ မဟုတ်ရင် ဦးနှောက်ရဲ့ နောက်ကျော တစ်နေရာမှာ ရှိနေခဲ့ပုံပဲ။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးလာတော့ လူငယ်တွေ ပျော်တာတွေ့ရင် ငါကော ဒီလိုပျော်ဖူးသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ပေါ်လာတတ်တယ်။ မနှစ်ကတော့ ခရီးသွားရင်း ကျွန်တော့်ဇနီးရယ်၊ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ် ထိုင်ပြီး စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းမှာ မိတ်ဆွေက တို့ ဘယ်တော့လောက် ဟိမဝန္တာတောင်ခြေ သွားကြမလဲလို့ မေးတယ်။ သူက အတည်ပြောတာ။ ဇနီးသည်က ရှင်လည်း အဲဒီစာရင်းထဲ ပါသွားပြီလားလို့ မိတ်ဆွေကို ကြားဖြတ်မေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မလည်း သူ့ကို သွားစေချင်ပါတယ်လို့ ဆက်ပြောတယ်။ မိတ်ဆွေကတော့ ပြန်မဖြေဘဲနေပြီး ခေါင်းခါတယ်။ ခေါင်းခါတယ်ဆိုတာကလည်း ခက်တော့ အခက်သား။ ဒါပေတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ခေါင်းခါတာကတော့ မကောင်းစိတ်နဲ့ ဆန့်ကျင်စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံတယ်။
ဒဿနိကဗေဒကို တော်တော်ရှုပ်တဲ့ ဘာသာရပ်ဟု ပြောစမှတ်ပြုကြသည်။ တချို့ဆိုလျှင် ဘယ်လောက်ဖတ်ဖတ် နားမလည်ဘူးဟု ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဝန်ခံကြသေးသည်။ မှန်ပါသည်။ ဒဿနိကဗေဒသည် အင်မတန်ရှုပ်ပါသည်။ ဝေါဟာရတွေကို စနစ်တကျလေ့လာသော ဘာသာရပ်လည်း ဖြစ်သောကြောင့် ဝေါဟာရများမှာ အင်မတန်နက်နဲပါသည်။ ထိုသို့ နက်နဲသော ဝေါဟာရများကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရာတွင် မြန်မာဘာသာစကား၏ နက်နဲမှုကြောင့် ပို၍ပင် ရှုပ်ကုန်ပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒဿနိကဗေဒကို နားမလည်ရသော အကြောင်းရင်း၏ လက်သည်မှာ စကားလုံးများပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါရတော့မည်။
ဒဿနိကဗေဒအကြောင်းကို ရေးသားရာတွင် အချို့ဝေါဟာရများကို မြန်မာဘာသာသို့ ဖလှယ်ခြင်း မပြုဘဲ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတိုင်း ရေးသားလျှင် ပို၍သင့်တော်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဘာသာစကားတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ဖလှယ်ရာတွင် မူရင်းအဓိပ္ပါယ်ပျောက်ဆုံးမှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ဒဿနိကဗေဒ ဝေါဟာရတချို့ကို မြန်မာသာသာသို့ ပြန်ဆိုလိုက်သောအခါတွင် အဓိပ္ပါယ်သွေဖီသည်သာမက လုံးဝမတူတော့သည်များပင် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဒေးကား၊ Matrix နှင့် အစစ်ယောင်ကမ္ဘာ
Matrix ရုပ်ရှင်ကားကို တော်တော်များများ ကြည့်ဖူးကြလိမ့်မည်။ ထိုရုပ်ရှင်ထဲတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများကို စက်ရုပ်များက ဖမ်းဆီး၍ စွမ်းအင်ထုတ်သည့်အခါတွင် လူသား၏ အသိအာရုံ (conscious) သည် matrix ဟူသော ကမ္ဘာ သို့မဟုတ် နယ်ပယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ထိုနယ်ပယ်၏ ပြင်ပတွင် သူ၏ အစစ်အမှန်လောကတွင် တည်ရှိနေခြင်းကို ကာယကံရှင် လူသားကိုယ်တိုင်သော်မှ သတိမပြုမိချေ။ သူ၏ စိတ်အာရုံသည် အမှန်တကယ်မရှိသော matrix နှင့်သာ အမြဲတစေ ထိတွေနေခဲ့ရသောကြောင့် ထို matrix ကိုသာ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အစစ်အမှန်လောက ဟု အထင်ခံရသော အတုအယောင် လောကကို အစစ်ယောင်ကမ္ဘာ (virtual reality) ဟု ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အစစ်ယောင်ကမ္ဘာ အိုင်ဒီယာကို ဦးစွာပထမ အစဖော်ပေးခဲ့သူမှာ ခေတ်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင်  ဒေးကား ပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ အတွေးအခေါ်စနစ်သည် သံသယကို အခြေခံသည်။ လောကတွင် သံသယ ဖြစ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးကို သံသယထားရမည်ဟု ဒေးကားက သူ၏ အတွေးအခေါ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မည်သည့်အရာကိုမျှ လုံးဝဥသုံ ယုံကြည်ခြင်း မရှိစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သံသယဖြင့် စတင်ပါမှ နောက်ဆုံးတွင် လုံးဝ သံသယမရှိနိုင်သော မငြင်းပယ်နိုင်သော အမှန်တရားကို ရောက်နိုင်မည်ဟု ဒေးကားက ဆိုသည်။ 
Diary Entry, 22th Feb
ဒီနေ့ အိပ်မပျော်ဘူး။ တကယ်တော့ ဒီနေ့ကျမှ ထွေထွေထူးထူး အိပ်မပျော်တာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ insomnia ဖြစ်နေတာကြာပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ genius တွေမှ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလို့ လိမ်ထားတာပဲ။ အိပ်မပျော်တာနဲ့ပဲ ဆေးလိပ်သောက်ရင်း လရောင်နဲ့ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငေးနေမိတယ်။ ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်က ခြံဝန်းကြီးထဲမှာ တိုက်နေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်အတိုင်း ဆောက်ထားတယ်။ ဝန်းရဲ့ အလည်ခေါင်မှာ သစ်ပင်ပန်းခြံလိုလို၊ ချုံလိုလိုရှိတယ်။ ညသန်းခေါင်းအချိန် လရောင်တစ်ဝက် သစ်ပင်တွေကို ထိုးနေတာ ကြည့်ရတာ လှတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ။ လရောင်တစ်ဝက်လို့ ရေးတာက ဒီနေ့လတစ်ဝက်ပဲ ရှိတဲ့နေ့မို့လို့ရယ်။ ဆေးလိပ်ကုန်သွားတော့ အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်ပြီး စာထိုင်ရေးလိုက်တယ်။
စာမရေးတာကြာနေပြီ။ ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာ နှစ်လစွန်းစွန်း ရှိရော့မယ်။ ဒီနှစ်လအတွင်း ရေးဖြစ်တာနည်းနည်းပါးပါးတော့ ရှိတယ်။ သိမ်းထားတာတွေလဲ ပါတယ်။ အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်သွားတာတွေလဲ ပါတယ်။ မတင်ဖြစ်တာကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ လမ်းမကြုံသေးလို့ပဲ ဆိုရမယ်။ ပို့စ်တစ်ခါတင်ရတာလဲ လွယ်တာမှမဟုတ်ဘဲ။ ကျော်ရခွရနဲ့။ ပြီးတော့ ဒီရက်ပိုင်း ကော်နက်ရှင်အခြေအနေဆိုးတယ်။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ လုပ်တာတောင်မှ အချိန်တော်တော်ကုန်နေပြီ။ ဘလော့စပေါ့ကို အချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Category - essay, poem